🥇 ▷ Gaar ah: Sawirro toos ah oo ka kooban iPhone XI, iPhone XIR iyo iPhone XI Max ✅
Gaar ah: Sawirro toos ah oo ka kooban iPhone XI, iPhone XIR iyo iPhone XI Max
Ilaa Apple ma shaacin doono jiilkiisa xiga iPhone. Sida sanadkii hore, sanadkaan waxaan heysan doonaa seddex iPhones – iPhone XI, iPhone XI Max iyo iPhone XIR oo la awoodi karo. Haa! Waxaan ku raacsanahay in Apple ay tahay inuu ka tago tirooyinka Roman.
Waxaan horeyba u ognahay waxa ay dhamaan seddexda taleefannadu u ekaan doonaan, Thanks to saddex-cabbir muuqaallo CAD ah oo ka yimid hoggaamiye lagu kalsoon yahay – Steve Hemmerstofffer, aka OnLeaks. Isbedelka ugu weyn wuxuu ku jiri doonaa qeybta dambe, halkaas oo dhamaan seddexda qalab ay ku lahaan doonaan muuqaalka muuqaalka kore ee jirka. The iPhone XI iyo iPhone XI Max waxay ku dari doonaan kaamiro dheeri ah si loo habeeyo kaamirada seddexda ah. IPIR XIR wuxuu sidoo kale heli doonaa dareemayaal dheeri ah oo loogu talagalay sameynta kamarad laba-gees leh.
Haddii aadan jeclaan naqshadeynta, waxba ma qaban kartid, maxaa yeelay waxaan helnay gacmaheena sawirada tooska ah ee kiisaska taleefanka, waxayna xaqiijinayaan in Apple runtii ku howlan tahay qaabeynta.
Laga soo bilaabo LR: Kiisaska loogu talagalay iPhone XIR, iPhone XI iyo iPhone XI Max
Sawirada ay soo saartay ilo warshadeed ayaa muujinaya kiisaska dhammaan seddexda taleefan. Marka laga reebo cabirka, ma jiro farqi u dhexeeya kiisaska taleefanka.
Xulashada Tifatiraha: Huami iyo Oclean waxay Daah Fureen Cilmiga Korantada ee Korantada Adduunka
Kiisaska ayaa qaabeeya Kevlar waana inay muujiyaan xajin wanaagsan. Kareemka laba gees leh ee kaamaradu waxay ku taal geeska bidix ee kore. Dhanka bidix ayaa ah batoonka awooda, iyo xakamaynta mugga iyo goynta badhanka hurdada waxay ku taal bidixda. Hoos waxaa ku yaal cutubyo loogu tala galay dejiyaha dejinta, hadalka iyo makarafoonka.